जिल्लाअस्पताल जिरीमा ५ किलोको ट्युमरको सफल सल्यक्रिया - सेतो गुरास
सेतोगुराँस Saturday, March 3, 2018
जिरी, १९ फागुन । दोलखाको रहेको जिल्ला अस्पताल जिरीले एक वृद्धाको शरीरमा रहेको ५ किलो ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ ।
जिरी नगरपालिका वडा नम्वर ३ की ६५ वर्षीया वृद्धा पेमाडोमा शेर्पाको शरिरबाट हिजो सफल सल्यक्रिया गरि ५ किलोको ट्युमर (मासुको डल्लो) निकालिएको जिरी अस्पतालले जनाएको छ । शल्यक्रिया मार्फत शेर्पाको थाईबाट ५ किलोको ट्युमर सफलता पुर्वक निकालिएको अस्पतालका ‘क्लिनिकल कोअर्डिनेटर’ डा.निशान्त ढकालले जानकारी दिए । रगतमा हुने हेमोग्लोविन ६ मात्रै हुँदा शल्यक्रिया गर्न जोखिम हुने भएपनि जोखिमका वावजुद सिमित स्रोत साधनमा सफल शल्यक्रिया गरिएको उनको भनाई छ ।
डा. ढकालका अनुसार ‘सामान्य मानिसको रगतमा हेमोग्लोविन ११ भन्दा माथि हुनुपर्छ, नत्र अत्याधिक रक्तश्रावका कारण अप्रेसन सफल नहुने अवस्था हुन्छ । तर, यो घटनामा भने हेमोग्लोविन ६ हुँदा पनि सफलतापुर्वक सल्यक्रिया गरिएको र अहिले उनको अवस्था समान्य रहेको छ ।’ शेर्पा हाल अस्पतालमै रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको डा. ढकालले बताए ।